Sobom-baravarana an-dakozia WOWOW Dobok'aretina Dobaka amin'ny rindrina
Home / Sitroka an-dakozia / WOWOW Milentika ao an-dakozia roa lovia miaraka amin'ny grid sy tatatra 33 m
Sobom-baravarana an-tsambo WOWOW Double Wlow miaraka amin'ny Grid et Drain 33 Inch
Ity lalampan-tsolom-bary wowow ity dia manatsara ny fampandehanana ny fandroana an-dakozia amin'ny alàlan'ny fampidirana fitaovana an-tsambo an-tsokosoko mivezivezy amin'ireo lalana mikambana ao anaty rano. Miaraka amin'ny colander vy vy izay azonao ampiasaina ho toy ny vatam-paty.
DIMENSY: 33 in. L x 19 in. W x 10 in. D; Haben'ny kabinetra kely indrindra: 36 in.
Ny vy vita amin'ny vy tsy miendrika G304ge dia manakana ny fahitana, ny fikoranana ary ny harafesina.
namboarina noho ny fantson-drano mora mandeha miaraka amin'ny tatatra tsy voalahatra, midina moramora, ary ny fantsona manakana ny rano tsy hisitrana any anaty rano mandeha - milentika tanteraka amin'ny feon'ny tompony miaro ny fanamafisam-peo, ao anatin'izany ny valala matevina matevina sy ny fiarovana miaro ny rivotra izay manindrona ny tabataba sy ny fanamafisam-peo rehefa milentika dia ampiasaina.
Fahazoan-dàlana voafetra mandritra ny androm-piainana miaraka amin'ny serivisy mpanjifa manana isa ambony indrindra.
Vatosoa matevina matevina
Ny tanana namboarina tamin'ny alàlan'ny setroka 1.5mm matevina (16 gauge) dia vy vy, ny fanoherana ny nify ary ny halavany lava.
X Fitarihan-tsipika X
Ny fitarihan-drano X amin'ny alàlan'ny 4 zorony mankany amin'ny sisin'ny lavaka sy ny tampon-tsolika ambany dia mahatonga ny rano mandeha tanteraka.
Fantson-tseratry ny refy 3.5 santimetatra, lalan-drano stainless vy, ary harona, manaraka tsara ny rano ary mihazona tsara ny loto ny loto.
Tafiditra ao anaty boaty: Sink, Colander, Grids Risses ambany, Fantson-tsakafo Fantson-kanina, Tetezana Cutout, ary Torolàlana fametrahana.
100% ny vola miverina ao anatin'ny 3 volana sy ny fampandehanana mandritra ny androm-piainany. Raha misy olana dia miangavy ahy ho afaka hampahafantatra ahy.
SKU: W70101-32-AMUS Sokajy: Sitroka an-dakozia Tags: lovia indroa, lalotra stainless vy milentika